माल्दिभ्समा चम्किँदै सावित्रा, भन्छिन्– बिदेसिन बाध्य नबनाऊ
नेपाली महिला फुटबलकी धरोहर हुन् सावित्रा भण्डारी । सावित्राले नेपाली फुटबलमा थुप्रै कीर्तिमान राखेकी छिन् । दक्षिण एसियाकै चर्चित स्टाइकर सावित्रा र मिडफिल्डर अनिता बस्नेत अहिले माल्दिभ्समा छन् ।
माल्दिभ्सको घरेलु फुटसल प्रतियोगिता विमेन्स फुटसल फिएस्टा २०१८ मा माल्दिभ्स पुलिस क्बलबाट सावित्रा र अनिताले खेलिरहेका छन् । पहिलो खेलमा नै आफ्नो क्लबलाई शानदार जित दिलाएकी सावित्रा र अनिताले यसअघि पनि माल्दिभ्सको घरेलु प्रतियोगिता खेलेका थिए । गत वर्ष माल्दिभ्स एयरपोर्ट क्लबबाट खेल्दै आफ्नो टिमलाई सेमिफाइनलसम्मको यात्रा पार गराएकी सावित्राको क्रेज माल्दिभ्समा पनि उत्तिकै छ ।
माल्दिभ्सको पुलिस क्लबसँग आबद्ध भएकी सावित्रासँग बाह्रखरीका सरोज तामाङले गरेको कुराकानीः
कस्तो भइरहेको छ माल्दिभ्स बसाइ र प्रतियोगिता ?
राम्रो भइरहेको छ । अरु देशहरूमा जस्तो नभए पनि रमाइलो नै छ । पहिलो खेलमा हामीले वाम्को टिमलाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गरेका थियौं । अब शनिबार टिम मेडसँग प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
माल्दिभ्स पुलिस क्लबमा कसरी आबद्ध हुनुभयो ?
यसअघि अनिता र मैले माल्दिभ्स एयरपोर्ट क्लबबाट राम्रो खेलेका थियौं । यो क्लबमा जुन इमेज बनाएका थियौं, त्यसले गर्दा पनि हो । त्यसबेला क्लबमा राम्रा खेलाडी पनि थिएनन् । हाम्रै मेहनतले एयरपोर्ट क्लबले सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो । यसले गर्दा पनि पुलिस क्लबमा आबद्ध हुन पुगेकी हुँ ।
हामीलाई यो सिजनमा अन्य दुई क्लबबाट पनि बोलाइएको थियो तर गएनौ । माल्दिभ्सकी कप्तान फाधुवा जाहिरसँग मेरो चिनजान थियो । अनि उहाँले मलाई खेल्नका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसपछि हामी यो क्बलमा आबद्ध भएका हौं ।
कति पारिश्रमिकमा आबद्ध हुनुभएको हो ?
२ हजार डलरमा हो । यो हाम्रो सबै सेवासुविधा कटाएर पाउने रकम हो । ९ वटा टिम रहेको यो प्रतियोगिता अप्रिल १८ तारिखसम्म हुन्छ । सबै व्यवस्था क्लबले नै उपलब्ध गराएको छ ।
विदेशी भूमिमा खेल्दा कस्तो फाइदा पुग्छ ?
नेपालमा फुटबल निकै कम हुन्छ । आफू फिटनेसमा रहिरहनका लागि पनि यस्ता अवसरले निकै फाइदा पुग्ने गर्छ । विदेशी खेलाडीसँग खेल्दा आफ्नो स्किल विकास हुनका साथैै क्षमता पनि बढ्छ ।
खेलाडीको उचित व्यवस्थापन नहुनु तथा घरेलु प्रतियोगिता शून्यजस्तै हुँदा कस्तो लाग्छ ?
यस्तै पारा हो भने म बिदेसिन्छु जस्तै लाग्छ । नेपाली फुटबलको अहिलेको अवस्थाले निराश बनाइसक्यो । एउटा इमेज बनाइसकेपछि त्यो इमेजलाई मेन्टेन गर्न निकै गाह्रो परेको अवस्था छ । घर परिवार पाल्नैपर्यो । अहिले महिला फुटबलमा केही छैन ।
यसरी नै चल्ने हो भने भोलि बिदेसिन बाध्य हुन्छु । नेपाली महिला फुटबलमा परिवर्तन भएन भने ममात्रै हैन, अरु पनि विदेशिन्छन् ।
काठमाडौं । १६औँ संस्करणको युरोकप फुटबलमा स्पेनले लगातार दोस्रो खेलमा बराबरी खेलेको छ । शनिबार राति स्पेनले पोल्यान्डसँग १–१ को... ४० मिनेट पहिले